Ubume obutofotofo, uYilo lwale mihla, ucocekile kwaye unoxolo - I-Airbnb
Ubume obutofotofo, uYilo lwale mihla, ucocekile kwaye unoxolo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguÖzgül
Ubutofotofo, bale mihla, bucocekile kwaye bunoxolo. Iflethi yethu, yonke eyilelwe ukuthuthuzeleka kwakho, ibekwe kwimizuzu emi-2 ukusuka kwiLifti yeMbali ngokuhamba, kanye kufutshane neKırk Merdiven cafe e-İzmir. Ukongeza, iAlsancak kunye neKonak zikumgama wokuhamba kwiziko. Ukuzola okukhethekileyo kunye nolonwabo lwesitrato saseDario Moreno kuya kuba kufutshane nawe. Kukuhambo lwemizuzu emi-3 ukusuka elunxwemeni kwaye kukho iKarataş Tram yokumisa ngaphaya kwayo.
--- iflethi yethu inentsholongwane phakathi kokuhlala. ---
Iflethi yethu yenzelwe ngokukodwa ukuthuthuzela iindwendwe zethu. Ukongeza, ibekwe kwindawo ekhethekileyo kakhulu ngokwendawo. Ikufuphi ne-elevator yembali kunye nezitrato zoyilo zeGreek eziyinyani kunye nezindlu kunye neSitalato saseDario Moreno, esihlala amashishini anxilisayo kunye nalawo anganxiliyo. Kufuneka uhambe imizuzu emi-2 kuphela ukuya kwizithuthi zikawonke-wonke, ungafumana iKarataş yokumisa iibhasi kunye nokumisa ibhasi kwisitalato iKesen phambi kwakho. Ngokuhlwa, unokuloba kwi-promenade, ulale engceni elunxwemeni kwaye uphuze isiselo sakho.
4.81 · Izimvo eziyi-75
Iflethi yethu ikwindawo ekhethekileyo kakhulu. Ikufuphi ne-elevator yembali kunye nezitrato zoyilo zeGreek eziyinyani kunye nezindlu kunye neSitalato saseDario Moreno, esihlala amashishini anxilisayo kunye nalawo anganxiliyo. Kufuneka uhambe imizuzu emi-2 kuphela ukuya kwizithuthi zikawonke-wonke, ungafumana iKarataş yokumisa iibhasi kunye nokumisa ibhasi kwisitalato iKesen phambi kwakho. Ngokuhlwa, unokuloba kwi-promenade, ulale engceni elunxwemeni kwaye uphuze isiselo sakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Özgül
Unganditsalela umnxeba nangaliphi na ixesha losuku ngayo nayiphi na ingxaki enokuthi yenzeke ngexesha lokuhlala kwakho. Kuya kundithatha kuphela imizuzu eyi-15 ukuza kuwe ukulungisa ingxaki :)